Soosaarka LSR & Rubber - Chapman Technology Co., Ltd.
Abuuraha Chapman awood u leh inay bixiso nidaamyada xakamaynta tayada sare leh ee ay u baahan yihiin daryeelka caafimaadka iyo warshadaha qalabka caafimaadka. Abuuraha Chapman waa ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016 / NS-EN iyo ISO 123485: 2016 waa la xaqiijiyay, waxaanan ku faanaynaa mid ka mid ah heerka cilladaha ugu hooseeya ee warshadeena.
Abuuraha ChapmanQolka nadiifinta ee fasalka 8aad ee ISO-shahaado ka haysta ISO, iyo sidoo kale shirkada walaasheed ee NKS's Class 7 cleanroom ee Singapore waxay ka hortageysaa wasakhda boodhka iyo walxaha kale ee hawada ku jira waxayna la kulmaan heerarka ISO ee lagama maarmaanka u ah soosaarka nadaafadda
Maaddaama mid ka mid ah shirkadaha wax ku oolka ah ee sumcadda caalamiga ah, Abuuraha Chapman wuxuu si gaar ah ula shaqeeyaa silsiladaha silsiladda la isku duro ee la isku duro. Waxaan leenahay khibrad wax soo saar si aan u siino adeegyo ka bilaabma noocyada hore iyo soosaarka taxanaha ah ee qaybaha saxda ah. Waxaan u qaabeyneynaa nidaamkayaga QA si aan ula kulanno shuruudahaaga gaarka ah.